Tsiahin’ny fahazazana ho fampandrosoana : hifamotoana ao Mandrosoa 106 ireo zanaky ny tanàna | NewsMada
Sambany ! Hihaona ao amin’ny tranompokonolona Mandrosoa, Andramasina 106, ireo zaza niara-nilalao fahiny tany alohan’ny taona 1990 teo an-tampon-tanànan’i Mandrosoa. Hotanterahina ny asabotsy 26 marsa izao izany ary hiompana amin’ny tononkiran’ny tarika Mahaleo, « Mba jerijereo ny tananàntsika » ny lohahevitr’ity fihaonana ity. Hanasana sy iantsoana ireo rehetra niara-nilalao teo an-tanàna tamin’izany fotoana izany ny hetsika. Nofidina rahateo io tononkira « Somambisamby » io satria anisan’ny novazoina teo amoron’arabe tamin’izany fotoana, ankoatra ny hiran’ireo tarika hafa, toa an-dry Lolo sy ny tariny…
Tsy nijanona amin’ny hira tahaka izany ihany, anefa, izy ireo tamin’izany fa teo ny fanehoana firaisankina sy fihavanana ary ny fifankatiavana. Teo koa ny valin-tanana rehefa fotoan’ny fiasana tanimbary na tanimboly na asa hafa koa… Niarahana hatrany izany. Tena ara-bakiteny ny trano atsimo sy avaratra. Tsy nifanavaka finoana na saranga izany.
Ho fampatsiahivana izany rehetra izany sy hifankafantaran’ireo zanaka aty aoriana no anton’ny fihaonana. Fotoana koa io hanehoan’ireo aty aoriana ny talenta sy ny fahaiza-manaony amin’ny lafiny rehetra raha mitaha amin’ireo ray aman-dreniny tany amin’ny 26 taona lasa. Hombam-bady aman-janaka rahateo ny rehetra ka sady hilanonana.
Ankoatra izany, anisan’ny horesahina ny fomba hampandrosoana ny tanàna.